Wararka - Sida loo doorto barkin1
Sida loo doorto barkin1
Barkin qaldan, oo la il daran dhabarka ilmo-galeenka
Barkimooyinku waxay door muhiim ah ka ciyaaraan hurdada dadka. Barkin ku habboon ayaa kaa caawin karta inaad si macaan u seexato. Si kastaba ha noqotee, isticmaalka muddada-dheer ee barkin aan habboonayn wuxuu sababi doonaa taxane ah noocyo isdaba-joog ah iyo xitaa inuu yeesho spondylosis afka ilmo-galeenka. Khubaradu waxay tilmaameen in xitaa barkin aad u baratay laga yaabo inaysan ahayn mida ugu haboon. Sideed ku dooran kartaa barkin sax ah naftaada, iyo waa maxay habka saxda ah ee loo isticmaalo barkinta? Aynu dhagaysanno hagida khubarada.
Barkin afka ilmo-galeenka ayaa khaldan, hurdadu waxay noqotaa "wax wada qabsi" qanjirka 'spondylosis'
Fadhi aan khaldaneyn, hoos u ciyaarista taleefannada gacanta, shaqada shaqada (sida shaqooyinka muddada dheer ee madaxa hoos u dhaca), jimicsi la'aan factors Arrimahan ayaa si ballaaran loogu yaqaanay inay sababaan qanjirka 'makaanka afkiisa. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira qodob kale oo muhiim ah oo si fudud loo indho-indheyn karo, oo ah hurdo. Dad badan ayaa kici subaxdii waxayna la xanuunsadaan qoorta iyo dhabarka oo xanuuna, addimada oo kabuubyo ah iyo dhib kale, oo muujinaya astaamaha 'qoorta adag'. Dadku badanaa waxay u maleynayaan inay taasi sabab u tahay hurdo xumo ama dabayl qabow. Xaqiiqdii, tani way suurtogal tahay. Waxaa sababa barkin aan habooneyn. Waxaan caadi ahaan dhahnaa haddii aad madaxaaga hoos u dhigto wax ka badan 1 saac, laf-dhabarka ilmo-galeenka ayaa si fudud loo saameeyaa. Qofka weyni wuxuu hurdo ku qaataa 1/4 ilaa 1/3 waqtiga hurdada (barkinta) maalin kasta. Dadku way seexdaan xilligan, wareeg kasta oo hurdo ah 90-120 daqiiqo, asal ahaan waxay ilaaliyaan muuqaal ahaan. Haddii barkinta si qaldan loo adeegsado muddo dheer, waxay sababi doontaa isbeddelo ku dhaca qallooca laf-dhabarka ilmo-galeenka, taas oo horseedaysa xasillooni-darro daba-dheeraatay ee laf-dhabarka ilmo-galeenka, kala-goysyada wadajirka ah, iyo dhaawaca xididdada. Cadaadiska ayaa ku soo baxa spondylosis afka ilmo-galeenka waqti ka dib. Barkin aad u dheer ayaa u dhiganta hoos u dhigida madaxaaga si aad u doorato barkin habeenkii oo dhan. Heerarka dad badan ayaa jilicsan oo raaxo leh, oo xiriir gaar ah la leh caadooyinka shakhsi ahaaneed, laakiin caadadani ma noqon karto mid sax ah. Isku-dubbaridka laf-dhabarka bini-aadamka wuxuu ka yimid Marka laga eego dhinaca, waa qalooca oo wuxuu leeyahay qaab-S ah. Waa "C" qoorta booska. Haddii aysan jirin taageero ku habboon, haddii qoorta ay laalaaddo ama dhinac u foorarsato muddo dheer, ama si la mid ah madaxa u foorarsato, way fududahay in la keeno maqaarka 'intervertebral disc' inuu soo boodo.
Horaa loo yidhi, "dib u fadhiiso oo nasiso", dhab ahaan, xulashada barkimadu ma noqon karto mid aad u sarreeya ama aad u hooseeya. Barkin aad u dheer ayaa la mid ah madaxaaga oo hoos loo dhigo habeenkii oo dhan. Way fududahay in la keeno dareen-celin afka ilmo-galeenka ah, taas oo ku sababi doonta cadaadis xad dhaaf ah qoorta isla markaana u keenta dhiig ku filan madaxa iyo qoorta. Sidoo kale way fududahay in la keeno hawo mareenka oo xumaada, hypoxia iyo ischemia, madax xanuun, wareer, tinnitus, iyo Calaamadaha sida hurdo la'aan. Dadka qaarkiis ee qaba cudurada laf-dhabarka ilmo-galeenka ayaa aaminsan in barkin hoose ama xitaa barkin la'aan ay faa'iido u leedahay gargaarka cudurka. Xaqiiqdii, barkin aad u hooseysa ayaa sababi doonta laf-dhabarka ilmo-galeenka inuu noqdo mid toosan, taas oo sidoo kale si fudud u sababi doonta isku dheelitir la'aanta bixinta dhiigga, muruqyaduna way nastaan ​​inta lagu jiro hurdada iyo qoorta Inta badan xoogga waxaa lagu dhejiyaa laf-dhabarka ilmo-galeenka, iyo way fududahay in la keeno maqaarka 'intervertebral disc' inuu soo baxo. Waa la arki karaa in dadka caafimaadka qaba iyo dadka qaba spondylosis ee afka ilmagaleenka ay tahay inay fiiro gaar ah u yeeshaan joogtaynta booska jir ahaaneed ee qanjirka afka ilmagaleenka si looga hortago keenista ama dardargelinta xumaanshaha laf-dhabarka ilmo-galeenka.